Calaamada Nuux - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Marka aan la hadlayo reer galbeedka oo aan kala hadlayo arrimaha ku saabsan Ilaah iyo qiyaamaha, jawaabta aan inta badan helo waa wax u eg, “Ma aan ka walwal qabo qiyaamaha maxaa yeelay Isagu waa mid naxariis badan mana aan filayo in uu Isagu runtii i xukumi doonaa”. Waa tan xisaabtanka Nuux (NNKH) keentay in aan run ahaantii weydiino sababaynta. Haa, Ilaah waa uu naxariis badan yahay, maxaa yeelay Isagu ma uu isbedelo oo weliba wuxuu ka buuxay naxariis wakhtigii Nuux (NNKH). Weli dunida oo dhan (marka laga reebo Nuux iyo qoyskiisa) Waa la wada baabbi’iyey oo la xukumay.
Suurat Nuux (Suurat 71 – Nuux) waxay inoo sheegaysa:
Gafkoodi Dartiis yaa loo Maansheeyay Naarna Loo Galiyey, mana helayaan Eebe ka soke gargaare, Nuux wuxuu yidhi Eebow ha kaga tagin Dhulka korkiisa Gaalada Ruxna. (Suurat Nuux 71:25)
Sidaas daraaddeed dee meeday naxariistiisii? Waxay ahayd oo ay ku jirtay doonnida.. Sida Ayaadka 64 ee Al-Araf noo sheegay:
Tags:Bilowgii daadcalaamada nebi Nuuxcalaamada NuuxNebi NuuxNebi Nuux ku TawreedNebi Nuux Quraankanebiyadii IslaamkaNuuxNuux ArkNuux daadNuux in al kitabNuux in bibleNuux in IslamNuux NebiNuux nebi al kitabNuux NNKHsanduuqii NuuxSuurat Nuux